Ifulethi elinembono entle yaseAustria
Neuburg am Inn, Bayern, Germany
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLuisa
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uLuisa iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Yamkelwa ngumbono omangalisayo we-Austria kunye neentaba, indawo yethu yokuhlala kunye nendawo yayo ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuzonwabisa. Ngaphandle kwendawo ezolileyo kwindalo, indawo yokuhlala isembindini weendawo ezintle kunye nezixeko.
Wamkelekile kwindawo yethu entle!!
Indawo yokuhlala kunye nendawo yayo ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokujonga indawo kunye neminye imisebenzi. Uyakwazi ukubona imbonakalo entle ye-Austria ejonge efestileni.
Indawo yokuhlala yahlulwe kwiindawo ezi-2. Indawo yokulala inamagumbi amabini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa yokuhamba kwaye ibekwe kumgangatho ophezulu. Indawo yesibini yikhitshi, efumaneka kumgangatho ophantsi kwaye ihlukaniswe kwindawo yokulala yi-staircase. Ngokubhukishwa okupheleleyo kwabantu abali-13, kusekwa elinye igumbi kumgangatho ophantsi. Enye igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese yeendwendwe ziyafumaneka.
Ngokubanzi, enye intsapho ihlala endlwini kwaye isebenzisa izitepsi, kodwa akukho nto.
Indlu yahlulwe yangamacandelo amabini. Indawo yokulala ikumgangatho ophezulu kwaye inamagumbi ama-2 kunye negumbi lokuhlambela elineshawa yokuhamba. Indawo yesibini yikhitshi, efumaneka kumgangatho ophantsi. Ikwahlulwe kancinane kwindawo yokulala ngokusebenzisa izinyuko. Ngokubhukishwa ngokupheleleyo kwabantu abali-13 kuya kubakho igumbi elongezelelweyo elilungiselelwe (umgangatho ophantsi). Igumbi lokuhlambela elongezelelweyo kunye nendlu yangasese yeendwendwe iya kulungiswa.
Kukho enye intsapho ehlala endlwini, esebenzisa izinyuko, kodwa ayikho enye into.
Ukuphosa ilitye e-Austria. Nokuba yilali encinci, enomtsalane yaseWernstein okanye idolophu enjengephupha yaseSchärding, zombini zinokufikelelwa ngemizuzu nje embalwa ngemoto. Ukongeza, i-Mariensteg elunxwemeni lwe-Inn inikezela ngomzila omfutshane kodwa onomtsalane wokuhamba ngeenyawo ukuya e-Wernstein kunye neendawo ezininzi zokuhlala ezincinci apho.
Isixeko sasePassau sinokufikelelwa ngemizuzu nje eli-15 ngemoto okanye ngebhasi. Ngobuchule bayo baseTaliyane obuphuphayo kunye nokudibana kwemilambo emithathu iDanube, Inn kunye ne-Ilz, idolophu yaseyunivesithi ibonelela ngemeko yedolophu eyodwa. Idolophu entle endala enePassau Cathedral ilungele ukuhambahamba kunye nokuphumla.
Imizuzu nje embalwa ukusuka eOstriya. Nokuba yidolophu entle yaseWernstein okanye idolophu entle ye-baroque yaseSchärding, zombini zinokufikelelwa ngemizuzu nje embalwa ngemoto. Ukongeza, i-Mariensteg elunxwemeni lwe-Inn inikezela ngomzila omfutshane kodwa onomtsalane ukuya e-Wernstein kunye neendawo zokutyela ezincinci nezinomtsalane apho.
Isixeko sasePassau sinokufikelelwa ngemizuzu nje eli-15 ngemoto okanye ngebhasi. Isixeko saseyunivesithi kunye noyilo oluhle lwase-Italiya kunye nokudibana kwemilambo emithathu i-Danube, i-Inn kunye ne-Ilz inika i-cityscape ekhethekileyo. Idolophu entle endala enePassau Cathedral ilungele ukuhambahamba kunye nokuzingisa.
Umbuki zindwendwe ngu- Luisa
Siyavuya ukukunceda ukuba uneminye imibuzo. Singakuvuyela ukukunika ulwazi oluthe kratya malunga neendawo zokundwendwela ezinokwenzeka kunye needolophu ezisingqongileyo.
Sithetha isiJamani kunye nesiNgesi. Ukuba uneminye imibuzo, zive ukhululekile ukubuza. Sikwakunika ulwazi oluninzi kunye neengcebiso zohambo lwakho ukuba uyathanda.
Siyavuya ukukunceda ukuba uneminye imibuzo. Singakuvuyela ukukunika ulwazi oluthe kratya malunga neendawo zokundwendwela ezinokwenzeka kunye needolophu ezisingqongileyo…